‘इटहरीलाई निर्बाध व्यवशाय गर्न सक्ने थलो बनाउने योजना बोकेको छु’ : राजेश खनाल
‘अब उद्योग वाणिज्य संघमार्फत् पनि सेवा गर्न चाहन्छु’ : जीवन पराजुली
पूर्वी नेपालमा मनसुनी बादल आउँदै, सचेत रहन विभागको अनुरोध
प्रकाश सपुतको नाममा दलित समुदायलाई गाली गर्नेविरुद्ध इटहरीमा उजुरी
११ वर्षे बालकले सुसाइड नोट लेखेर गरे आत्महत्या
इटहरी चौक दशैँ पछि मात्र भत्कने
वर्षातमा यस्ता घरेलु औषधि बढी प्रभावकारी
न्यूजलय मङ्गलबार १७, साउन २०७४
वर्षातको समयमा बिरामी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यो समयमा बढि रुघाखोकी, ज्वरो आउने लगायतका समस्याका साथै मलेरिया, निमोनिया जस्ता रोग समेत लाग्ने गर्दछ । विशेषगरी रोगप्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएकालाई वर्षायाममा बढी मात्रामा स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ । यो समयमा हुने विभिन्न भाइरल र ज्वरोका लागि....
एक दशकमा आधाले घट्यो एड्सबाट हुने मृत्युदर
काठमाडौं । पछिल्लो वर्षहरुमा तुलनात्मक रुपमा एचआइभी एड्सका कारण हुने मृत्युदरमा कमी आएको पाइएको छ । पछिल्लो एक दशकमा झण्डै आधाले कमी आएको देखिएको हो ।
युएनएड्सको तथ्यांक अनुसार सन् २००५ मा एड्सकै कारण विश्वभर १९ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए । अहिलेको....
युरीक एसिड के हो ?
हाम्रो शरिरमा प्रोटिनको मेटाबोलिजम भएर निस्कने तत्वलाई युरिक एसिड भनिन्छ । न्युक्लिक एसिड र प्युरिन ग्रुपको प्रोटिनबाट युरिक एसिड बन्छ । जुन पिसावबाट बाहिर निस्कन्छ । ७० प्रतिशत शरिभित्रबाट र ३० प्रतिशत हामिले खाने प्रोटिनबाट युरिक एसिड बन्छ । हाम्रो शरिरमा उत्पादन भएको युरिक एसिड....
कुन फलको बियाँ कति उपयोगी
हामीले दैनिक रुपमा खाने गरेका फलमा बियाँ हुन्छ । ती बियाँ कत्तिको उपयोगी हुन्छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । कति फलका बियाँ खान्छौं त कति फलका बियाँ फाल्छौं । केहि यस्ता फल छन्, जसको बियाँ स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै उपयोगी हुन्छ । जस्तो स्याउको बियाँ,....
किन खाने हरियो धनियाँ ?
– हरियो धनिया सुगन्धयुक्त हुने भएकाले यसले खानाको स्वाद बढाउँछ । अरुचिको समस्या भएकाहरूले चटनी अथवा तरकारीमा हरियो धनिया मिसाएर खाँदा राम्रो हुन्छ ।
– आँखासम्बन्धी सबै किसिमका समस्या भएकाहरूका लागि हरियो धनियाँ खानु लाभदायक हुन्छ ।
– हरियो धनियाले शारीरिक कमजोरी हटाउन....
यस कारण निदाउँछन् हात– खुट्टा
प्रायजसो मानिसलाई हातखुट्टा निदाएको अनुभव हुने गर्दछ । हातखुट्टा निदाउँदा एकछिन निकै पीडा हुन्छ । उभिन र हिड्न पनि असहज हुन्छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ? हामी सोच्छौं हातखुट्टामा पर्याप्त मात्रामा रक्तसन्चार नभएका कारण निदाउने गर्दछ । तर यस्तो होइन खुट्टा नसाका कारण निदाउँछ....
पेट फुल्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् घरेलु विधि
आजभोलि धेरै मानिसहरुमा बारम्बार पेट फुल्ने समस्या देखा पर्न थालेको छ । यस्तो समस्याको कारणले धेरै मानिसहरु हैरान भएका हुन्छन । त्यसैले पेट फुल्ने समस्याबाट बच्न यस्ता घरेलु उपायहरु अपनाउन सकिने छ ।
१. चिया कफि कम गर्ने
चियामा हुने क्याफिन र पोलिफेनोल्सले....
यस्ता खानेकुरा खाली पेटमा बिर्सेर पनि नखाऔँ
सुतेर उठ्दा शरिरमा एसिडको मात्रा धेरै हुने गर्दछ । त्यसैले यस्ता खानेकुराहरु खालि पेटमा खानुहुँदैन ।
केरामा क्याल्सियम, म्याग्नेसियम हुन्छ । खाली पेटमा खाँदा क्याल्सियम, म्याग्नेसियमको ब्यालेन्स बिग्रने भएकाले एसिडिछी हुनसक्छ ।
चियामा एसिडको मात्रा धेरै हुन्छ....
यसरी गर्नूहोस् आँखाको हेरचाह
गर्मीमा महिनामा आँखामा धरै समस्या हुने गर्दछ । हाम्रो शरीरको महत्वपुर्ण र संवेदनशील अंग आँखा हो । अहिले गर्मिको समय भएकोले गर्मीमा आँखा पाक्ने, चिलाउँने र आखा पोल्ने समस्याहरु ले बढी देखा पर्छ ।
-आँखा पाक्ने समस्या
हाम्रो आँखामा देखिने सेतो भाग आँखाको....
यी खानाहरु खानुहोस् र उच्चरक्तचापबाट छुट्कारा पाउनुहोस्
प्याजः भान्सामा सधैं हुने प्याजले रगत पातलो पार्छ र कोलेस्टेरोल घटाउँछ । प्याजले एस्प्रिन औषधिको काम पनि गर्दछ । प्रतिदिन ५० ग्राम काँचो प्याज खानाले उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा सहयोग पुग्दछ ।
भट्मासः भट्मासले पनि कोलेस्टेरोलको स्तर कम गर्छ ।
तरबुजाः तरबुजाको सफा बाहिरी भाग, जसलाई प्रायः सधै फ्याँक्ने....
आधा पारिश्रमिकमा बार्सिलोना फर्किन तयार भए नेइमार
सेनाको संख्या कटौतीको प्रस्तावमा रक्षा मन्त्रीको यस्तो स्पष्टीकरण
बिना मगरको कार्यक्रममा कांग्रेस र नेकपा कार्यकर्ताबीच झडप, चार जना घाइते
प्रदुषणका कारण मलेसियामा चार सय विद्यालय बन्द
दुईजना वृद्धहरुले देखाए अद्भुत स्टन्ट ! (भिडियोसहित)
मोटरसाइकलको ठक्करबाट विराटनगरकी एक महिलाको मृत्यु